​​HATRIIK AFAAN OROOMIFFAN| Dhimmoota gurguddoo torbee 17ffaa (taphattoota) — HATRICKSPORT
HATRIIK AFAAN OROOMIFFAN Oduu HATRIIK የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ
​​HATRIIK AFAAN OROOMIFFAN| Dhimmoota gurguddoo torbee 17ffaa (taphattoota)
March 17, 2020 March 17, 2020 ዳዊት ታደሰ
👉👉 Tapnii eegama galchii malee xumurame.
👉👉kidus geyorgis taphota lammaa walitti ansee yoo mo’atamu barana kan jalqaabati
👉👉Bulchinsi magaala adama bara yeroo jelqabaf diire essa alaa mu’atee
👉👉Mujib qaasim taphoota sadii waliti ansee galchi ittuu galchin baheera
👉👉Salaadin sa’iid degartotan rukutame
👉👉Galchii ollana galchan
🔑Tapnii eegama galchii malee xumurame.
Tapha istaadiyoomi tiigray irratti makale 70 inderta fi bulchinasa magala bahardari waliin taphatan galchii malee xumuraamera. Degartootni bulchinsaa magala bahardarii garee essani degaruuf garaa makale yamuu senan degartoota makale 70 indartaa irraa siimana adda godhaniruf. Erga tapnii xumuramees booda afeera irbatta godhameraaf. Siimanan akana kun jajabeefamu qaaba.
🔑kidus giiyorgis taphota lammaa walitti ansee yoo mo’atamu barana kan jalqaabati
Leenjisaa isaa fi iitti anna isaa hoji irra dhoorku isaatin taphatoota moxano hin qabnen galee taphaa kan godhee kidus giiyorgiis dakika 34ffaa iraatti galchii aschalew girmaa galchen muu’atamera. Torben duraa kidus giiyorgis bulchinsa magaala walkiteetin muu’atamun issa kan yaadatamudha.
🔑Bulchinsi magaala adama bara yeroo jelqabaf diire essa alaa mu’atee
Sababa adaabbi fedareshiiniitin taphoota lamma diiree isaan alaa kan taphaatu bulchinsii magaala walkitee bulchinsa magaala adaamatin 2-0 muu’atamera. Bulchinsi magaala adama barana yeroo jelqabaf diire essa alaa yamuu muu’atuu kun kan jalqaabati. kanaan markinaa fi barakat destaatu galchii galani lamaanin Bulchinsi magaala adaama muu’atee
🔑Taphootni 5 qaabxii walkiixan xuumuraman
Taphoota toorbe kanan godhaaman 8 kessaa taphooni 5 walkiitan xuumuramaniru. Kun amoo liigiichii jalqabame hanga torbee 17ffaatti taphoota daanu walkiitan yamuu xuumuraman kun isaa jalqaabati.
Mujiib qaasim taphoota sadii waliiti ansee galchi ittuu galchin baheera
Taphaatan sarara fulduraa faasil kanamaa galchiiwan 14 galchuudhan duursaa jiruu muujib qaasim taphoota sadii waliiti ansee galchi ittuu galchin baheera. Taphaa toorbe 14ffaa faasil kanamaa kiilaba kidus giiyorgis taphatan 2-2 walkiixaa bahaan iratti galchii kan galchee taa’uun isaa ni yadaatama
Salaadin sa’iid degartotan rukutame
kidus giiyorgis taphaa bulchinsa magaala sabata walin goodhen muu’atamera. Degartooni kilabaa kidus giiyorgis lammaa taphataa fulduraa kan taa’e salaadin saa’iidin rukutaniruu. Salaadin saa’iidii dakika 62ffaa iraatti abaa sera taphiichatiin kaardi diimatin diree irraa ariiyatamera. Kaardi kenamuu isaatin kan arree taphaatichi dawiitii taphaatoni uffataa gedaran buuke jiruu rukutuudhan miidhaame gara hoospital betazat deeme yaalamera.
Torbee 17ffaa iraatti galchiiwan 10 galaniiru. Kun jechun amoo galchiiwan 1.25 giidu galesaan galaniiru. Torbee darbee galchii galaan irraa 17n gadii bu’eera. Galchiiwan 10 taphatoota adda addatiin galanii. Galchin kenan markinee dakika 5ffaa iraa kan galee galchii ariifasiisa ta’eera taphatan jimmaa abba jifar ermiiyas hailu dakika 90ffaa iraa galche amoo galchii boodati hafa galtetii
Taphoota 8 kessaa 5 walkiixaa tumuramaniru tapnii sadii walmu’achuudhan tumuramaniru. taphoota torbee kana qaabxiiwan isaani kan armaan gadiiti
Sadarkan kiilabota torbe 18ffaa kana fakkata
Galchii ollana galchan
Taphaatan sarara fuldura faasil kenamaa mujib qasim galchii 14 yoo dursu habtamuu gezahanyii fii adiis gidaay buna siidama iraa biiruk bayanee bulchinsa magaala hawasa iraa fiitsuum alemu bulchinsa magaala bahardar fi bayee gazahanyii walayita dichaa galchii walkiixaan 9liin dursa jiru
← ሀትሪክ ትግርኛ | መበል 17 ሰሙን ዓበይቲ ፍፃመታት ኘሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ
አወዳዳሪው አካል ሊጉ የሚጀመርበትን ቀን ይፋ አድርጓል →